Ku keydi 6 $ kiis qad ah oo la qaadi karo oo ku dari kara wax kabadan saacadaha batteriga 10 saacaddaada 'Nintendo Switch' - BGR - TELES RELAY
ACCUEIL » heshiisyo »Badbaadi 6 $ kiiska la qaadi karo ee gacanta lagu soo daro oo ku dari kara wax ka badan saacadaha batteriga 10 saacadahaaga Nintendo - BGR
Ku keydi 6 $ kiiska la qaadi karo ee gacanta ku soo dari kara in ka badan saacadaha batteriga 10 saacadahaaga Nintendo - BGR
Nintendo Switch ma ahan qalabka kumbuyuutarka ciyaarta kufiican, laakiin waa mid aad u adag. Xaqiiqdii, cabashada kaliya ee aan ka qabo ku saabsan 'Switch' ayaa ah inaan had iyo jeer u ciyaari karin sidii aan rabo. Helitaanka isku dheelitirka saxda ah ee ka dhexeeya finesse iyo nolosha batteriga marwalba waxay culeys ku yihiin milkiile kasta oo la qaadi karo, laakiin taasi waa sababta kiisaska saddexaad ee batteriga ay u jiraan. Waxaan kugula talineynaa inaad iska eegto xarkaha batteriga BigBlue 10 000 mAh oo loogu talagalay Nintendo Switch taas oo ku dareysa saacadaha 10 ama madax-bannaani intaa ka sii badan oo loogu talagalay mashiinka aad jeceshahay ee Nintendo.
Halkan waxaa ku qoran dhibcooyinka ku qoran xaashida wax soo saarka:
10000mAh Case Battery: Ballaariyaha weyn ee Beytariga Bateriyada wuxuu ku darayaa 10 saacadood oo saacad ciyaar ah badalidaada oo leh badhanka bateriga ee 10000mAh ee dib loo soo celin karo. Sidoo kale ku isticmaal batariga baterigaaga casrigaaga casriga ah, kiniiniyada, akhristayaasha iyo aaladaha kale meelkasta, waqti kasta.
Xakamaynta Ergonomic: timirta timirta ahi waxay yareysaa daalka gacanta waxayna siisaa khibrad raaxo leh oo raaxo leh iyo khibrad ciyaar. Kuu ogolaanayaa inaad dheereeyso muddo dheer.
Bixinta Awoodda 3.0: Beddelka xatooyada iyo batteriga laba-celinta kaabaya ee taageerada taageero PD3.0 dhakhso. Nidaamka maaraynta baytariga caqliga leh wuxuu hubiyaa dallacaad badbaado leh iyo tilmaamayaasha 4 LED waxay muujinayaan heerka baytariga. Kaararka ciyaarta oo dheeri ah ee Joy-Con Grip.
Amniga Koowaad & Adeegyada lagu kalsoonaan karo: Ilaalinta Sirdoonka Qarsoodiga ah, Taageerada xad dhaafka ah, xad dhaafka ah iyo ilaalinta wareega gaaban, ka aamin san in la isticmaalo. BigBlue waxay bixisaa 2 sano oo dammaanad qaad ah iyo adeegga macaamiisha oo dhan.
Raac @BGRDeals on Twitter si aad ula socoto dalabyada ugu dambeeyay uguna guulaha badan ee shabakada. Tirada ayaa laga yaabaa inay koobnaato. Qiimayaashu waa isbeddelayaan ogeysiis la'aan ayaa laga yaabaa inay dhacayaan waqti kasta. Qaar ka mid ah deeqaha ayaa laga yaabaa inaysan u heli karin dhammaan macaamiisha. BGR waxay heli kartaa komishanka amarada lagu meeleeyay sheygan.
Source Image: Serpell-Rand / REX / Shutterstock
Woot! waxay siisaa qalab aad u fiican oo Amazon ah iibkeedii maalin ee ugu dambeeyay - BGR